Ziziphi iintlobo ezahlukeneyo zeezwi?
Kukho ezine iintlobo zezimelabizo : Izivakalisi zezifundo, izibhengezo zezinto, izibhengezo ezibi kunye nezivakalisi zokubonisa . Iimpawu ziyingxenye yesibhozo yentetho .
Izibhengezo zithatha indawo yomntu, indawo okanye into kwiimvakalisi xa umxholo uqondwa. Umzekelo:
UPetros uthanda ukuhamba yakhe inja epaki. Uhlala ehamba ngeekhilomitha ezintathu okanye ngaphezulu.
Kule meko, izivakalisi 'yena' kwisigwebo sesibini sithatha indawo 'kaPetros', kwaye into 'ayifake' esikhundleni sayo 'inja yakhe'.
Amazwi asetyenziselwa kuzo zonke iilwimi eziquka isiNgesi ukuze lula ulwimi. Abafundi besiNgesi kufuneka bafunde ezi zilandelayo iindidi zezivakalisi, ukuhlawula ingqalelo ekhethekileyo kwiintlobo ezincinci phakathi kwefom nganye.
Izibhengezo zezifundo - mna, wena, yena, yona, thina, wena, isebenza njengesifundo sesivakalisi:
Ndihlala eNew York.
Ngaba uthanda ukudlala i-tennis?
Akafuni ukuza ngokuhlwa.
Ngeke kube lula.
Sifunda iziteremisi okwangoku.
Uye waya eParis ngonyaka odlulileyo, akunjalo?
Bathenge imoto entsha ngenyanga edlulileyo.
Injongo ivakalisa - mna, wena, yena, yona, thina, wena, ukhonza njengento yesenzi.
Wakuxelela ukuba uze ebusuku.
Wamcela ukuba ancede.
Bamtyelela xa beza eNew York.
Wasithatha kwisikhumulo sezindiza.
Utitshala wabuza ukuba uqedele umsebenzi wesikolo.
Izibhengezo ezibonakalayo - yam, eyakho, yakhe, yakhe, yayo, yayo, eyethu, eyakho, ibonisa ukuba into yowomntu.
Qaphela ukuba izimelabizo eziphathekayo zifana nezichazi eziphathekayo (yam, yakhe, yayo). Ukwahlukana kukuba into elandela isichazi esinempahla kodwa ayihambisani nesibizo somnini. Umzekelo - I-Possessive Pronoun: Le ncwadi yimi. - I-Adjective: Incwadi yam.
Le ndlu yimi .
Oku kungokwakho .
Ndiyaxolisa, nguye .
Ezi ncwadi ziye.
Abo bafundi bawethu .
Khangela ngaphaya, ezo zihlalo zingezakho .
Iindlu ziya kuba ziluhlaza.
Izibhengezo zokubonisa - oku, ukuba, ezi, ezo zibhekisela kwizinto. 'oku' kunye 'nezi' zibhekisela kwinto esondele. 'oko' kunye 'nabo' babhekisela kwizinto ezikude.
Le yindlu yam.
Leyo imoto yethu apho.
Aba bahlobo bam kweli gumbi.
Zizo iintyatyambo ezihle kwintsimi elandelayo.
Izichasiselo ezibonakalayo - zam, zakho, zakhe, zayo, zethu, zethu, zakho, zihlala zididekile kunye nezivakalisi eziphathekayo. Isichazi esinokuziguqula sichaza isibizo esilandelayo ukuze sibonise ifa.
Ndiza kufumana iincwadi zam .
Ngaba leyo imoto yakho yilapho?
Ngulo titshala wakhe , uMnu Jones.
Ndifuna ukuya esitolo sakhe .
Umbala wayo ubomvu.
Ngaba singabazisa abantwana bethu ?
Wamkelekile ukumema iintsapho zakho .
Bathengela abantwana babo izipho ezininzi.
IsiJamani kubaQaleli Qalisa kunye neTrinken
Izibambiso zesiLwimi zesiTali: iFesteggiare